June 2020 – Ayyaantuu
Ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa: Jawaar Mohaammad dabalatee namoonni 35 to’annoo jala ooluu poolisiin ibse (BBC Afaan Oromoo) — Jawaar Mohaammad fi eegdota isaa dabalatee namoonni 35 to’annoo jala ooluu Poolisiin Federaalaafi Poolisiin Oromiyaa ibsa waloon mirkaneessan. [Read more]
Daawud Ibsaa: ‘Oromoon qabsoo keessatti ilmaan qaqqaalii dhabaa dhufe, kan Haacaaluu kun garuu bakka murteessituu kan geesse nutti fakkaata’ (BBC Afaan Oromoo) – Waggoottan darban keessa Oromoon ilmaan isaa qaqqaaliifi kichuu, akkasumas manguddoota qabsoo gaggeessaa [Read more]
Statement on the Brutal Killing of the Oromo Hero – Artist Haacaaluu Hundeessaa Oromia Global Forum 6909 Laurel Ave, Suite 5219 Tacoma Park, MD20913 Email: Jemal.sadik@mnpera.org Phone: 612-483-0161 Tuesday, June 30, 2020 We, the Oromia [Read more]
Ethiopia: Popular musician’s killing must be fully investigated (Amnesty International) — The Ethiopian authorities must conduct prompt, thorough, impartial, independent and effective investigations into the killing of popular Oromo singer Hachalu Hundesa on 29 June, [Read more]
Breaking News – Oduu Ammee ( police irrraa) Woliif Qoodaa Diraamaa kana Fashaleessaa Namoota 5, dhiira 4 fi dubartii takka kaadiroota #Bilxiginnaa bifa basaasatiin hojjachaa turanii fi jiran keessaa filtanii Hacaaluu nutu ajjeesse, kan nu [Read more]
ABO: Yakka ajjeechaa Artist Haacaaluu faana balleessuuf yaaluun haala kamiinuu fudhatama hin qabaatu Ibsa dabalataa ABO waxabajjii 30/2020 Ibsi koomiishiniin poolisii federaala Itoophiyaa ajjeechaa kaleessa Artist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwate ilaalchisuudhaan guyyaa har’aa TV FAANAA [Read more]
Haala yeroo Irratti Marii Jaal Marroo waliin godhame !!
Sagalee haqaa ukkumsuu fi qabsoo ummataa daandii irraa maqsuuf daba dalagamu ni balaaleffanna Ajjeechaa Artist Haacaaluu Hundeessaa ilaalchisuudhaan ibsa ABO Waxabajjii 30/2020 Ajjeechaa rifaasisaa fi gaddisiisaakaleessa Waxabajjii 29 2020 galgala Artist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatamee [Read more]
“Biyya tuffatan Harreen keessa garmaamu” “Biyya tuffatan Harreen keessa garmaamu” jedha Oromoon. Hanga Oromoo tuffatan qaroo isaa keessaa dhabamsiisan. Yaalin ajjeechaa hardhaa miti HaaCaaluu irratti kan eegalte. Tan hardhaa yaalii yeroo dheeraa booda mata hidha [Read more]
Voice of Oromiyaa (Afaan Oromo Program) in Twin Cities, MN
Voice of Oromiyaa (Afaan Oromo Program) in Twin Cities, Minnesota, June 28, 2020